ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: 2009
ကဗျာရယ် ဒါပဲ ငါ့မှာ ရှိနေတော့တယ်.......။
အရောင်ခပ်မွဲမွဲ ဘ၀ဆိုတာကြီး...။ ။
ချစ်သူအတွက်လို့ ငါမကြွေးကြော်ဘူးပေါ့..။ ။
ခုတော့ ငါဘာမှ ဘာတခုမှ
ချစ်သူနဲ့ တစ်သက်တာဝေးစေတဲ့။ ။
အဲဒီနေ့က ကျူရှင်ကနေပြန်လာတဲ့သူမလွယ်အိတ်လေးချပြီး ထမင်းစားဖို့ နောက်ဖေးခန်းကို အသွားဟိန်းကနဲ့ ထွက်လာတဲ့ အသံ
"သွား နင်လဲအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွား နင့်အမေအမျိုးတွေနဲ့ နင်လဲအတူတူပဲ ရော့ ဒီမှာနင့်အထုပ်.."
ကျယ်လောင်ပြီး နီမြန်းသောမျက်နှာနှင့် ဒေါသ၏လွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံနေရသော သူမ၏အဖေ ..ပြောလဲပြော အထုပ်တစ်ထုပ်လဲ သူမရှေ့ ကိုပြုတ်ကျလာတယ်.. ဒီအချိန်မှာပဲ အမေ့ရဲ့ အသံကိုသူမစကြားလိုက်ရတယ်။
"ရှင် ကလေးကိုဘာမှပြောနေစရာမလိုဘူး ပြောခြင်းပြောကျုပ်ကိုပြော။"
"သမီးအိမ်ရှေ့ မှာသွားဆော့နော်။" တဲ့..
ဒါနဲ့ပဲ သူမလည်း အယောင်ယောင်အမှားမှား ရှေ့မှာရှိတဲ့ အထုပ်လေးကောက် ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီး အိမ်ရှေ့ ပြန်ထွက်လာတယ်။
နောက် မှာတော့ အဖေနဲ့ အမေရဲ့ ပွဲကြမ်းတဲ့ အသံတွေ..
သီတင်းကျွတ်မေမေနဲ့ဖေဖေ့ ကိုကန်တော့ဖို့ သူမမုန့်ဖိုးတွေစုနေတာ..ဒီတော့ မုန့်စားဆင်းချိန် မုန့်မစားရဘူးလေ။ ပြီးတော့ ကျောင်းကအပြန် ကျူရှင်ကိုတန်းပြေး ဆိုလိုက်ရတဲ့ စာ ဆရာတိုင်ပေးတိုင်း လိုက်ဆိုနေရတာ ..မောလဲမော ဆာလဲဆာနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်..ကြိုနေတဲ့ ဒီအသံတွေ..ဖြစ်နိုင်ရင် မကြားခြင်ဘူး.
ဖေဖေ ကဆို ညီမလေးမှညီမလေး။ငါ့ကိုတော့ သိပ်ချစ်ပုံမရဘူး။ အေးပေါ့လေ..ဘယ်ချစ်မလဲ ငါကလည်းငယ်ငယ်ထဲက
ဖွားဖွားနဲ့ဖိုးဖိုး တို့ဆီမှာအနေများတာကိုး.ခုကျောင်းစတက်တော့မှ ဖွားဖွားတို့က ဒီကိုပြန်ပို့တာ..ခုဆို သူမ ပထမတန်းတောင် တက်နေရပြီ။ဟိုတစ်လောကများ ညီမလေးသူဘာသာသူ ကစားလို့ချောလဲတာကို ဖေဖေက ရိုက်လိုက်တာ မျက်လုံးထဲမှာကြယ်တွေ.လတွေတောင်မြင်သွားတယ်။မမြင်ပဲနေမလား..မျက်နှာကို လက်ပြန် ရိုက်လိုက်တာကိုး..ဟွန်း အဲဒီထဲက ညီမလေးဆို စိတ်မှာအမြင်ကိုမကြည်တော့ဘူး ဟွန်း သူ့ကြောင့်လေ ဖိုးဖိုးဆို ဒီလိုမပြောနဲ့ ဆူတောင်ဆူဖူးဘူး..
စိတ်ကလဲတွေးနေတော့ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေလည်း ၀ိုင်းနေပြီ။
သူမသူငယ်ချင်းတွေ ဆော့နေကြတယ်..သူမကတော့ ဆော့ခြင်စိတ်လဲရှိပါဘူး။
သူမဒီလိုမဆော့တော့တာ ဖေဖေတို့ဆီကိုပြန်ရောက်ပြီးမှ အရင်ကဖိုးဖိုးတို့အိမ်မှာဆို သူမအရမ်းပျော်ခဲ့ပါသည်။
အဒေါ်တွေဦးလေးတွေ ဖွားဖွားတို့ကချစ်မှချစ်။ ခု..ဒီကိုလည်းရောက်ရော နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့ ရန်ပွဲ ဘာကြောင့်လဲတော့ မသိပေမယ့် ဖေဖေက အမြဲပြောတာတော့ မင်းအမျိုးတွေ မင်းအမျိုးတွေ နဲ့ မေမေကတော့ ငွေ..ငွေလို့တော့ ပြောနေသံကြားတာပဲ..သူများတွေဆို အဖေတွေအမေတွေက ကျောင်းလာပြီး မုန့်စားဆင်းချိန်ဆိုရင် မိဘတွေက မုန့်လာပို့ရတာနဲ့ ထမင်းလာကျွေးရတာနဲ့ သူမကတော့ လာကျွေးဖို့ပြောနဲ့ မုန့်တောင်မစားနိုင်ဘူး။ သူမစုရတဲ့ မုန့်ဖိုးလေးနဲ့ မေမေတို့ကို ကန်တော့ရင် မေမေနဲ့ဖေဖေ ပျော်သွားတာကို သူမကြည့်ခြင်လို့ပါ။ ခုတော့ ရန်ပွဲကလည်းမပြီးသေးဘူးထင်တယ်။ သူများမိသားစုတွေဆိုရင် ပြုံးလို့ပျော်လို့ တစ်ခြားသူမနဲ့ရွယ်တူကောင်မလေးတွေဆို သီတင်းကျွတ် လှတပတ အကျီလေးတွေတောင် ၀ယ်ပြီးပြီတဲ့ ဟွန်း..
ကြွားနေကြတာ..သူမမှာတော့ မေမေကလည်း သတိမထားမိဘူးနဲ့တူတယ်..လေး ငါး ထည်ထက်ပိုတဲ့ အကျီမရှိ..
အင်းလေ မေမေလဲ ၀ယ်ပေးခြင်မှာပါ..ပြီးတော့ မုန့်စားဆင်းချိန် လာခြင်မှာပါ..
အလုပ်ကအားတယ်မှမရှိတာကို ချက်တာပြုတ်တာပြီးတော့ စက်လဲချုပ်သေးတာကို ဖေဖေကတော့ မြို့ထဲသွား ပြီးရင် အလုပ်ရှင်တဲ့ စကားလုံးတွေသုံး မေမေနဲ့ပြော ဖေဖေလဲစက်ချုပ် နှစ်ယောက်လုံးတော့ ပင်ပန်းတာပါပဲ။
ဒီတော့ သူမလဲမေမေနဲ့ဖေဖေကို ဘယ်တော့မှ ဟိုဟာလိုခြင်တယ် ဒီဟာလိုခြင်တယ် ပူဆာလေ့မရှိ။ ဖေဖေနဲ့မေမေ သနားပါတယ်လေ..ဒီတော့ သူမမှာ ရှိတာလေးနဲ့ပဲနေတတ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဖိုးဖိုးကပြောတာ ငါ့မြေးကသိတတ်ပြီး လိမ္မာတဲ့ကလေးပါတဲ့။ ပြီးတော့ အေးလဲအေးတယ်တဲ့။
တစ်ကယ်တော့ သူမနေရတာ မပျော်ပါဘူး သူမတစ်ယောက်ထဲ အမြဲတမ်း သူမတစ်ယောက်ထဲ။ ညီမလေးကတော့ သူမလိုမဟုတ် လိုခြင်တာရရင်ရ မရရင်တော့ ဖေဖေနဲ့မေမေ ခါင်းပူပြီးသာမှတ်။ သူမထက်စာရင် ညီမလေးက ပိုပြည့်စုံသည်ပဲ.အကျီတွေလဲပေါသည်။ မုန့်လည်းစားခြင်တာစားလို့ရသည်။
တစ်ခါလောက် အသံပြဲကြီးနဲ့ ငိုလိုက်ရင်ပြီးပြီ ညီမလေးလိုခြင်တာ အားလုံးရှေ့ကိုရောက်။ ဖိုးဖိုးပြောတဲ့ ငိုတတ်တဲ့ ကလေးမုန့်စားရ ဆိုတာမျိုးနေမှာ။
စဉ်စားရင်းနဲ့တောင် သူမသတိထားမိတယ်..သူမငိုနေတာ..မျက်ရည်တွေတောင် တော်တော်ကျနေပြီ။ သူမက ဒီလိုအချိန်ပဲ ငိုတာ..မျက်ရည်တွေများ မျက်နှာမှာရွှဲလို့..တစ်ခြားချိန်ဆို သူမမကြိုက်တဲ့ ဟင်းနဲ့တောင် ထမင်းတစ်နပ်ပဲဆိုပြီး ကြိတ်မှိတ်ပြီးစားတာ နောက်တော့ မကြိုက်တဲ့ ဟာတောင် ဘာမှန်းမသိတော့ဘူး။ အင်း..ငိုရတာနဲ့ စဉ်းစားနေမိတာတွေနဲ့ သူမတော်တော်လေးနုံးချိနေသလိုခံစားရတယ်..အိပ်ခြင်လာသလိုပဲ..အင်း..ဗိုက်လဲအရမ်းဆာနေပြီ..ဖိုးဖိုးတို့ဆီကို ငါသွားမယ်..ဟုတ်တယ်ခုချိန်ဖိုးဖိုးတို့ဆီကိုသွားမယ်..ဖိုးဖိုးတို့ ကဟိုဘက်ရပ်ကွက်မှာနေတာ..မှောင်တော့နေပြီ ကွင်းပြင်ကြီးတော့ ဖြတ်လျှောက်ရမယ်ဟိုဖက်ရပ်ကွက်နဲ့ ဒီဖက်ရပ်ကွက်ကို ခြားထားတာ..ဟင်.. ဖြစ်ပါ့မလား နေ့လည်ဆို လူတွေဖြတ်နေကြပေမယ့် ခုလို ညခုနှစ်နာရီ လောက်ဆို လူပြတ်ပြီ ကြောက်စရာကြီး ငါတစ်ယောက်တည်းကို..
သူမတွေးလည်းတွေး ခုနက လမ်းထိပ် အုတ်ခုံပေါ်ထိုင်နေရာကနေ ခြေထောက်တွေရွေ့လိုက်တယ် လမ်းထိပ်ကို လျှောက်သွားလိုက် လမ်းထဲ ပြန်ဝင်လာလိုက် မျက်လုံးမှာလဲ မျက်ရည်တွေက အဆက်မပြတ်ကို ကျနေပြီ...လက်ထဲမှာ အထုပ်ကလဲ ပိုက်ထားသေးတယ်.မှောင်ကလဲတော်တော် မှောင်နေပြီ..
ဟာ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ကွာ သူမဆုံးဖြတ်ပြီး လမ်းထဲပြန်ဝင်လာတဲ့ ခြေထောက်တွေကို ပြန်လှည့်လိုက်တယ်..ဒီချိန်မှာပဲ
သူမအားကိုးအရဆုံး အသံနှင့်တူ သူမကိုယ်လုံးလေး စွေ့ကနေပွေ့ချီသွားတယ်.
"မြေး လေးဘယ်သွားမလို့တုန်း လက်ထဲမှာလဲ အထုပ်ကြီးနဲ့ပါလား..ဟာ ငါ့မြေးငိုထားတာ မျက်ရည်တွေလဲ
ရွှဲလို့ ပါလား..ကြည့်စမ်း ငါ့မြေး ဓာတ်ရှင်မင်းသမီးလုပ်မလို့ ကျင့်နေတာဖြစ်ရမယ်..လာလာဖိုးဖိုးချီပြီး အိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ်နော်"
ဒီလိုဒီလို ကြားမှသူမပိုတောင် ငိုခြင်လာသလိုပဲ။သူမ ခက်အက်အက် ငိုသံနဲ့ ဖိုးဖိုး လို့ခေါ်ပြီး ဖိုးဖိုးပခုံးပေါ်ကို အားကိုးတစ်ကြီးနဲ့ သူမခေါင်းကိုမှီချလိုက်ပြီး..ဖိုးဖိုးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်ထားမိတယ်..ပြီးတော့ ငိုသံစွပ်စွာနဲ့ ဖိုးဖိုးမြေးဗိုက်ဆာတယ်.လို့ သူမဘ၀မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပူဆာလိုက်မိတယ်.
သူမ ငယ်စဉ်က အဲဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုသူမစဉ်းစားနေဖြစ်တာပါ။
ခုတောင် မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေတောင်ဝိုင်းနေပြီ။သူမနောက်မှ မေမေတို့ပြန်ပြောသလောက် သိရတာကတော့ သူမလမ်းထိပ်မှာ ထိုင်ပြီး ငိုနေတာကြာနေလို့ လမ်းထဲကသိတဲ့ သူတစ်ယောက်က ဖိုးဖိုးကို သွားခေါ်လာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အင်း ဖိုးဖိုးသာရောက်မလာခဲ့ ရင် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မယ် သူမမသိပါ။
အင်း အဲဒါကြောင့်မို့ပြောကြတာ ငယ်ရွယ်နုနယ်နဲ့ ကလေးတွေရဲ့စိတ်ကို အနာတရဖြစ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့လို့
ခုတော့ သူမလူကြီးဖြစ်လို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင် ရင့်ကျက်နေတဲ့ အချိန်မှာတောင် အဲဒီအဖြစ်အပျက်လေးက စိတ်ကိုဝမ်းနည်းအောင် လုပ်နိုင်တုန်းပဲ။ ခုတော့ သူမရဲ့ အားကိုးရာ ဖိုးဖိုးလဲ မရှိတော့ပါဘူး အဲဒီရန်ပွဲလေးပြီး နောက် တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ ဆုံးသွားတယ် ထင်တာပဲ သူမမမှတ်မိတော့..အရမ်းကို အံ့သြစရာကောင်းတယ်လို့ပဲပြောပြောပါ..သေချာတာတစ်ခုကတော့ ..အဲဒီနေ့ သူမခံစားရတဲ့ အရာတွေအားလုံးမှတ်မိပေမယ့် ကျန်တဲ့ ပထမတန်းကနေ ပဉ္စမတန်းထိ အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံး သူမ..မမှတ်မိတော့ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကပြန်တွေ့လို့ ခေါ်ရင်တောင် သူမမသိတော့ပါ။ အဲဒီအတန်းတွေကြားထဲမှာဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်သူတွေ နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်လဲ သူမ မသိပါ။ ဖေဖေတို့ မေမေတို့ ကပြောပြရင်တောင်သြော် ဟုတ်လားနဲ့ ပြီးခဲ့သည့် သူမဖြစ်သွားပါသည်။
ပဉ္စမတန်း နောက်ပိုင်းတော့ အသိညဏ်ရင့်ကျက်လာလို့ပဲလား မပြောတတ် သူမပြန်မှတ်မိလာခဲ့သည်.ဒါပေမယ့် ညီမလေးအပေါ်မှာ အမြင်မကြည်မှု ဖေဖေ၊မေမေ တို့ကို ဘက်လိုက်တယ်လို့ ထင်တဲ့စိတ်ကတော့ ခုချိန်ထိ ဘယ်လို
မှ ဖျောက်လို့မရ အသိညဏ်နှင့် သူမထိန်းသည်ပဲ မရပါ။ လက်တွေ့ကိုယှဉ်ကြည့်သည် မရပါ။စိတ်ထဲမှာ စွဲနေပြီ သည်စိတ်က။ ဒါကြောင့် ညီမလေးနဲ့ သူမ ညီအစ်မသာဖြစ်သည် သူမပေါင်းသော ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ လောက်တောင် မရင်းနှီးကြပါ။သူမကို ညီမလေးနဲ့ပတ်သတ်ရင် အေးဆက်ဆက်နိုင်လွန်းတယ်လို့ ပြောကြသည်။ သူမလဲ ပြင်ကြည့်သည် ဘယ်လိုမှ မရပါ။ဒီတော့ သူမဘ၀နဲ့ ယှဉ်ပြီးအသိညဏ်ရလိုက်သည်။ တစ်ကယ်လို့များ တစ်နေ့မှာ..သူမသည် မိဘ တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် သူမ၏ သားသမီးများအား ဒီလိုခံစားချက်မျိုး ဒီလိုနာကျင်မှုမျိုး ဘယ်တော့ မှ မပေးဖြစ်အောင် သူမသတိထားရမည်။သူမ၏မိသားစုလေးကို အေးချမ်းသာယာသော ဘ၀လေးပဲ ပေးမည်။ အေးချမ်းမှု.စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ ပဲ သူမပေးဖြစ်အောင် ကြိုးစားမည်။ သူမ မရခဲ့သောဘ၀ကို သူမ၏မိသားစုလေးအား သူမပေးမည်။ သူမကြိုးစားရမည်။သူမ ကြိုးစားနေရအုန်းမည်။
တတ်သလောက် သိသလောက် စာပေအရေးအသားနဲ့ ဆွေလေးရေးသားလိုက်တာပါ။ အကယ်၍များ စာဖတ်ရင်း အထာမကျတဲ့
အရေးအသားလေးများပါရင် ခွင့်လွတ်ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ရင်း...
အလည်လာသူ ဘလော့ မောင်နှမများကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေရှင်။
မင်းထာဝရ ပြုံးပျော်နေစေရမယ်...။ ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က CBOX မှာလာအော်သွားတဲ့ အသိအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဒီကဗျာလေးကိုရေးပေးလိုက်တာပါ။ သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးဆိုလို့ပါ။ တင်ပေးလိုက်တာ နောက်ကျပါ တယ်။ ကဗျာဆိုတာလဲ စိတ်မှာအခွံကြီးပဲရှိတဲ့ အချိန်ဆိုရေးလို့မရတာ ဆိုတော့ ခုလိုအေးအေးဆေးဆေး ရုံးပိတ်ရက်မှပဲ
တင်နိုင်ပါတော့တယ်။ ကဲ.. လာလည်တဲ့ ဘလော့ အစ်ကိုကြီး အစ်မကြီးများနဲ့ မောင်လေးတို့ရေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြပါ
အဲဒီအစ်ကိုကြီးရဲ့ အချစ်ရေးအမြန်ဆုံး အဆင်ပြေပါစေလို့...
ဆွေလေးကတော့ ချစ်တဲ့သူတိုင်းကို ပေါင်းရစေခြင်တယ်။ ချစ်နေကြပြီး အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဆိုတဲ့ စကားလုံးထောက်
ထောက်ကြီးကြောင့် ဝေးသွားရတယ်ဆိုရင်...သီချင်းစာသားလေးလိုပေ့ါ.."ဒဏ်ရာဆိုတာ အချစ်တဲ့လား" ဖြစ်နေမှာစိုးလို့...
ကဲ..ဒီနေ့တော့ ဘလော့ setting လေးပြင်လို့ အဆုံးသတ်သွားတာနဲ့ အတူ ရေးဖို့ပြင်နေတာကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒီပို့လေးကို အဆုံးသတ်လိုက် ပါတော့တယ်။ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ကံ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ပြီးသား လူမျိုးတွေပါ။ ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မကျော်ဖြတ်လာရတဲ့ အတွေ့အကြုံ အမြင်အရပြောရရင်တော့ ၀ဋ်ဆိုတာနောက်ဘ၀ မကူးတော့ပါဘူး။ချက်ခြင်းကို အကျိုးပေးတော့ တာပါပဲ။ကိုယ်ကသူများကို လက်ညှိုးတစ်ချောင်းထိုးရင် သူများက ကိုယ့်ကိုလက်ညှိုးဆယ်ချောင်းမက ပြန်ပြီးအထိုးခံ ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဘာလို့ဒီအကြောင်းလေးကိုရေးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ပါးစပ်နဲ့ ကိုယ်ပြောတာ ဘယ်သူမှ ဂရုစိုက်စရာမလို ဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေ အတွက်ပါ။ ကိုယ်ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး အကျင့်လေးပါနေလို့ ပြောလိုက်ဖြစ်တာ ခံရတဲ့သူများအတွက်ကျတော့ မေ့လို့ကိုမရဘူးဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ပြုသူအသစ်ဖြစ်သူအဟောင်းတဲ့ ..သူများကအနေအထိုင် မတတ်တာကိုလဲ အမယ်လေးကြည့်လို့ကိုမရဘူး ပျားကိုတုပ်နေတာပဲဆိုတာမျိုး(ကျွန်မတို့ ရပ်ကွက်ထဲကကြားနေကြ စကားလေးသုံးလိုက်တာပါ.) ကိုယ်ကကြည့်ပြီး လိုက်ပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကပြုသူအသစ်ဖြစ်တော့ မှာပါပဲ။ ဒီလိုစာမျိုးရေးပြီးပြောနေတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကရော အတင်းမပြောဘူးလားလို့မေးရင် ..မပြောဖြစ်တာများပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မက ကိုယ်ဘာသာ ကိုယ်လုပ်နေတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်. သူများဖြစ်နေတာ သူများလုပ်နေတာကို ကြည့်ပြီးလိုက်ပြောဖို့ ကျွန်မဘ၀မှာအဲလောက် အချိန်မရခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ဘ၀ကအဲလောက် မချိုမြိန်ခဲ့ပါဘူး။ အဲလောက်တောင်ပဲလားလို့ ပြောရင် ဟုတ်ပါတယ် အဲလောက်တောင်မှ ပါပဲ။
ဒီတော့ ကျွန်မအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပြောပြပါ့မယ်။ တစ်ကယ့် အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ ကျွန်မတို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ သူများအကြောင်းဆိုရင် စိတ်ဝင်တစားဖြင့် အတော်ပြောတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ သူ့အလုပ်သမား တစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သူသွားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအိမ်မှာ ပိုလီယိုရောဂါရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ညဏ်ရည်ကလဲ သိပ်မပြည့်ပါဘူး...သရေတွေဘာတွေလဲ မထိန်းနိုင်တဲ့ပိုလီယိုရောဂါသည်လေးပါ။ အဲဒီကလေးက သူ့ရဲ့လက် ကိုသွားကိုင်လိုက်တာကို သူ့မှာတော်တော်ရွံရှာပြီး အော့နှလုံးနာစရာလို ချက်ခြင်းရေတွေ ထဆေး ပြီးတော့ မိဘတွေကိုလဲ တော်တော်လေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကလေးမိဘတွေမှာ အလုပ်ရှင်ကလဲဖြစ် ဆင်းလဲဆင်းရဲဆိုတော့ ငိုပြီးနေယုံကလွဲ ရင်သူတို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ဆီမှာ ၈ လသားအရွယ်သမီးကလေးတစ်ယောက်လဲ ရှိနေပါတယ်။ မြေးဦးလေးလဲဖြစ် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ပထမဆုံးကလေးလဲဖြစ်တော့ သူ့သမီးလေးက တော်တော်လေး ကံကောင်းပါတယ်။အားလုံးလိုလို ၀ိုင်းချစ်နေကြတာကိုး။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာတော့ သူ့ယောက်ကျားရဲ့ အမျိုးတွေရှိတဲ့ အညာကရွာဘက်ကို ကလေးကိုခေါ်ပြီး သူတို့ခရီးသွားကြပါတယ်။
အဲဒီမှာ ကလေးကခရီးပန်းပြီး ဖျားတော့တာပါပဲ။ ရွာဆိုတော့လဲ ထုံးစံအတိုင်း လူကြီးတွေကရှေးကျကျဆိုတော့ ကလေးကို အပူတွေကန်နေတာဆိုပြီးတော့ ခေါင်းတုံးပါတုံးလိုက်တော့ ကလေးက အပူတွေ ကြီးပြီး တက်တော့ တာပါပဲ။
ဒီတော့မှ ဆေးရုံတွေဘာတွေပြေးကြ ဘာကြနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ကြားထဲက ကလေးကမြေဇာပင်လို့ပြောရမှာပါပဲ။
သူရွံတယ်ဆိုတဲ့ ပိုလီယိုလိုဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။ အပူကြီးပြီးတက်လွန်းအားကြီးလို့ ကလေးကညဏ်ရည်မမှီတော့ပါ ပြီးတော့ သရေလဲမထိန်းနိုင်ပါ..နောက်တစ်ခုကတော့ လမ်းလဲမလျှောက်နိုင်တော့ပါ။
ကဲ.. ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ သူက သူရဲ့ပြောနေကြအတိုင်း ၀သီဖြစ်နေလို့ အဲဒီနေ့ ကပြောလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့်တစ်ဖက်ကကြည့်တော့ သားသမီးလေ စိတ်ထိခိုက်တာပေါ့။ ဒီတော့ သူ့ကိုပြန်ထိတယ်လေ..ဒါပေမယ့် ဖြစ်တာက သူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူး ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ လူ့လောကထဲကို ရောက်ကစ ကလေးတစ်ယောက်..ပြီးတော့ မွေးထဲက ဒီလိုဖြစ် နေတာဆိုလဲကလေးရဲ့ကံပေါ့လို့ပြောလို့ရတယ်။ ခုတော့ အဲဒီကလေးရဲ့ အနာဂတ်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ သူ့မှာနောက်ထပ် သားသမီးထပ်မရတော့တာပါ။ သူနောင်တရပါတယ် ..သူပြောခဲ့တာတွေအတွက်ပါ။ ဒါသူကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တာပါ..ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့သမီးနဲ့ ကျွန်မနဲ့က အသက်တူတူလောက်ရှိပါတယ်။ သူ ကျွန်မကိုကြည့်ပြီး သူ့သမီးလေးအတွက် ယူကျိုးမရဖြစ်နေတာပါ။ သူ့သမီးလေးလဲ ဒီအရွယ်လူကောင်းဆိုရင် ကျွန်မလိုပဲ ပညာတွေသင်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရမှာပေါ့။ခုတော့..ခုတော့ ..သူအဲလိုပဲ နောင်တရနေဖို့ တတ်နိုင်ပါတော့တယ်။
ဒါဟာတွေ့ကြုံဖူးတာတွေထဲကမှ တစ်ခုပါ။ ဒီတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ကိုဖြူစင်အောင် ထားပြီး ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀မှာ
ကောင်းတာကို များများလုပ် ကုသိုလ်များများယူပြီး အေးချမ်းတဲ့ စိတ်ကိုရအောင်ယူကြပါလို့ ကျွန်မကတော့ တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
င်္ဒီနေ့ ဆွေလေး ဘလော့ရဲ့ setting တွေကို ကလိဖြစ်ပါတယ်။ ဟဲဟဲ..
ထုံးစံအတိုင်းရတော့ရဧ။် အချိန်တော့ ကုန်ဧ။်ပေါ့လေ..ဒီတော့ sunday ဆိုတဲ့ ၀ိသေသအရ အပြင်သွားရအုန်းပါအုန်းမယ်..
shopping(စ်) ပါ..ကြွားတယ်လို့မထင်စေလိုပါရှင်..သွားမဲ့နေရာကိုပြောခဲ့တာပါ..... :P :P :P
ဒီနေ့အတွက်လို့ပြောပေမယ့် ဒီ ပုံမကျပန်းမကျ ဘလော့setting ကတော့ နောက် ၃၊၄ ရက်လောက်ကြာအုန်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ညဘက်ကလည်းပြန်လာရင် နောက်ကျအုန်းမယ်...မေမေတို့နဲ့လဲ တွေ့ဖို့ ချိန်းထားသေးတယ်ဆိုတော့
ဒီလို အေးအေးဆေးဆေး ပြင်ရမဲ့ ဘလော့ setting ကိုမပြင်နိုင်သေးပါဘူး။နောက်နေ့ ကျတော့ monday ဆိုတော့ လေ..
အလုပ်ကိုမှီအောင် အချိန်နဲ့ နပန်းလုံးပြီး ပြေးရပါအုန်းမယ်..အိပ်ပုတ်ကလဲ နဲနဲလေးမဆိုစလောက်လေး ကြီးလို့ပါ..
မျက်စိလည် လမ်းမှားပြီးရောက်လာတဲ့ ဘလော့လည် မောင်နှမများရော..ပြီးတော့ ခုမှစပြီးရေးကာစ ဆွေကဗျာလေးများကိုအားပေးသော ဘလော့အစ်ကိုကြီး အစ်မကြီးများရော..မောင်လေးများရော..အားလုံးပါပဲ..
ဒီဘလော့ setting လေးနဲ့ပဲ သည်းခံပြီး လာလည်ပေးပါလို့။ ပြီးတော့ စာလုံးပေါင်းလေးများ ဒီတောင်းပန်စာမှာ မှားနေရင်လဲ
ပြင်ပြီးသာ ဖတ်ပေးကြပါကွယ်...ဆွေလေး နောက်ကျနေလို့ ပြန်မစစ်တော့ပါ။ တန်းပြီး publish လိုက်ပါတယ်..
ငါ့ ဘ၀မှာ ဖြစ်ခြင်တာက
ဘာလို့များ အလွမ်းတွေ ကို
ငါဖြစ်လိုက်ခြင်တယ်................... ။ ။
ရင်ထဲမှာ အလွမ်းတွေ ရောက်လာတယ်
သေလုနီးနီး နာကျင်မှုတွေ ပြန်ခံစားလာရတယ်
ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဒီနေ့ ဆိုတာကိုဖြတ်ပြီး
မနက်ဖြန်မှာ မင်းလဲ ပျောက်ခြင်ပျောက်သွားနိုင်တယ်..
ငါကြောက့်ရွံ လာတယ်..ငါ့ချစ်သူရယ်။ ။
အချစ်နဲ့ ခပ်ဝေးဝေးကို ငါပြေးထွက်ခဲ့ပေမယ့်....